Iindaba -Iingqayi ezingama-30 ezilungileyo zeebhakethi zazo zonke iindlela, amaxesha kunye nohlahlo-lwabiwo mali ngo-2021
Impilo yabaseTyhini inokufumana iikhomishini ngokuqhagamshela kweli phepha, kodwa sibonisa kuphela iimveliso esikholelwa kuzo. Kutheni usithemba?
Xa kuziwa kwimikhwa yefashoni, iminqwazi yamabhakethi iza kwaye ihamba njengomoya. Ukusuka kumnqwazi webhakethi webhakethi weBritney Spears kwiminyaka engama-90 ukuya kokufanelekileyo njengesipho se-gimmick kwii-2000s zakuqala, kwaye ngoku kwindlela yokubaleka (kunye neTikTok xa iyonke), iminqwazi yamabhakethi ayisiyomfashini kuphela kodwa iyonwabisa nokunxiba— zikwasebenza kakhulu. Nokuba ujonge indlela entle yokuzikhusela elangeni elunxwemeni, okanye ufuna nje into eyonwabisayo yokongeza umdla kwijeans yakho elandelayo kunye nokubonakala kweT-shirt, kukho ukhetho kuzo zonke izimbo zeBucket cap (ethathwe emntwini de malunga nenyanga edlulileyo, wayechasene kakhulu neekepusi zebhakethi).
Ukuba ujonga iklasikhi, ukubukeka kwe-retro, unokukhetha iminqwazi ye-intarsia crochet, ethi icele ukudibana neepikniksi kunye nesundresses. Okanye mhlawumbi ufuna ukunxiba into emboxo xa uphuma ebusuku-kuya kufuneka ujonge umnqwazi webhakethi. Ngaba awufumani mkhuba wentsimbi ngokwaneleyo? Lo mnqwazi wokuloba wegolide ukhwaza igama lakho. Kukho neekepusi ezirhabaxa zokufuma ezenzelwe ngokukodwa iimbaleki ezikumgama omde (zikwalungele kakhulu ukubila iintsuku zaselwandle!) Kunye neminqwazi yamabhakethi enziwe ngoboya eyenzelwe abalandeli beminqwazi yamabhakethi ngawo onke amaxesha onyaka.
Iminqwazi yamabhakethi yeyona nto imelwe kukuba nefashoni. Nangona ungatyala imali kwizinto zokunethezeka, elona candelo lililo kukuba uninzi lwazo luphantsi kwe- $ 20, nto leyo ebenza badibanise kamnandi kuyo nayiphi na impahla ngaphakathi kuhlahlo-lwabiwo mali Eyona ndlela iphambili. Nantsi iminqwazi yamabhakethi efanelekileyo onokuyifumana ngoku:
Ewe oku kuya kubeka uncumo nakubani na okujongileyo, kodwa xa ujonga indlela okhangeleka umhle ngayo, iya kwenza okufanayo nakuwe.
Kukho imibala engama-32 onokukhetha kuyo, ungothusi ukuba unemibala emininzi kwikhabhinethi yakho yokufikelela. (Zive ukhululekile ukuqala ngeziqwenga ezibini, ukuze wena kunye ne-BFF yakho nibe nakho ukuthatha iiselfie ezithandekayo.)
Ibhabhathane elihonjisiweyo liphuma ngaphandle kwe-90s vibe, kodwa uyilo olulula luyenza umnqwazi obalaseleyo onokuwudibanisa nayo nantoni na. Umlomo owomeleleyo, owomeleleyo ukwakulungele kakhulu ukukhuselwa lilanga.
Iminqwazi yamabhakethi elula kunye neklasikhi iphantse yanyanzeleka ukuba ubenayo nayiphi na ikhabethe elinemfashini namhlanje, kodwa ukuba awukaqiniseki ukuba le nto ikulungele, awuyi kuphulukana nayo nayiphi na le ntloko yebhakethi exabisa i-8 yeedola.
Ngemibala eli-12 yeklasikhi engathathi hlangothi kunye neprints onokukhetha kuzo, yindawo elungileyo ukuqala (okanye ukuphuhlisa) i-arsenal yakho yebhakethi.
Isigqoko sebhakethi se-unisex sinemibimbi yendalo kwaye ilungile ekugcineni ngokungakhathali. Ukongeza, yenziwe nge-100% yomqhaphu, efanelekileyo kwaye ephefumlayo kwimozulu eshushu.
Inquma kulo mnqwazi ligqibelele ngokungaqhelekanga "Oo, yinto endala le? Ndiyifake nje, ”jonga. Kuze kufakwe i-SPF 50 yelaphu, ekhusela isikhumba sakho entlokweni elangeni-iyahambelana ngokugqibeleleyo nebikini yakho entsha.
Kunzima ukuxhathisa njenge-leggings efunwa kakhulu nguLululemon, le umnqwazi we-emele onamacala amabini athambileyo ubeka uyilo oluthambileyo olunamacala amabini ngecala elipholileyo nelingafaniyo kunye necala elinomdla elishicilelweyo. Kanye njengemidlalo yabo yezemidlalo, lo mnqwazi usebenzisa uphawu lweempawu zophawu lwendlela ezine kunye nokubila-ukubetha ilaphu, ukuyenza ukuba ubenayo kwezohlobo lide.
Esi sikhwama sebhakethi esineziqwenga ezibini siphuma kwindawo ephambili yaseLondon kwaye ilungele ukuthatha iifoto zeentsuku zemvula kunye ne-BFF.
Ewe, kukho umnqwazi webhakethi emini nasebusuku. Ukuba ufuna ukunxiba umnqwazi oshicilelweyo kodwa awuqinisekanga ukuba ufuna ukujongwa ngesibindi, oku kuphrinta kumacala amabini kwitsheri / umnqwazi omnyama lukhetho olufanelekileyo. Awuyithandi iitsheri? Ukuba unomdla ongathathi hlangothi ngakumbi, le tie-dye emhlophe iya kuba ntle.
Usenokungathandabuzeki ngemfashini yeengwenkala kunye neempapasho zolusu lwenyoka xa zaqala ukuvela, kodwa ndikholelwe ukuba inkomo zenkomo ziya kukhula ngokuqinisekileyo kuwe. Ukuba uqalile ukuyithanda emva kokubona amanqaku ayo kumakhulu eevidiyo zeTikTok ze-OOTD, ke ukuba ungumthandi wefashoni onesibindi, uya kwazi ukuba le yinto ekufuneka uyenzile.
Umnqwazi owenziwe ngesandla wenziwe nge-velvet yesilika eyi-100% kwaye ithambe kangangokuba ungade ufune ukulala kuwo. Cinga ngayo njengomnqwazi wokuloba owenziwe ngesandla ngamaphupha akho.
Ukunyaniseka, nayiphi na umnqwazi webhakethi unokuba yi-unisex, kodwa le umnqwazi uthandwayo usebenzisa imibala engathathi hlangothi kunye nelogo yeAdidas, nokuba yeyiphi na isitayile sakho, inokunika abantu imbonakalo yezemidlalo, enesitayile kunye nefashoni. zive.
Incinci incinci, ke qiniseka ukuba inkulu (kwaye ufumane enye ngenxa yokuba iqabane lakho linokuba le nto kuwe).
Lo mnqwazi uguqukayo ulula, uqinile kwaye awunamanzi, eyilelwe ezona ntsuku zishushu ngaphandle. Ububanzi beesentimitha ezimbini ububanzi bunokukhusela intloko kunye nentamo elangeni (kodwa ungaze ulibale ukufaka i-sunscreen!).
Le ndwangu ye-suede yokufakelwa ayilungelanga kuphela ukuhamba, kodwa inomdla kwaye inemfashini. Ukuba awufuni ukuzama imibala eqaqambileyo okanye iipateni okwangoku, le yindlela entle yokufumana into eyahlukileyo.
Akuyomfihlo ukuba ifashoni inokuba yindlela enamandla yokuhambisa ulwazi. Le umnqwazi weMibala yoMnqamlezo webhakethi enomtsalane othi "Amandla Kubantu" ngowona mzekelo mhle.
Ewe kujongeka kumhle kakhulu, kodwa elona candelo lililo kukuba ngokuthenga le hat, uxhasa uphawu olusiza ekwakheni intengiso yefashoni esekwe kulutsha oluntsundu.
Veza amahlakani akho kunye nokuzingca ngale nombolo ibenyezelayo, ukusuka kumngcelele ukuya kwiqela lakho lokwenyani, ngokuqinisekileyo liya kutsala iliso (okanye ezine). Nokuba yeyiphi na indlela, eli qhekeza licela indawo kwigridi yakho ye-Insta.
Ukuba ikhephu alunqandi uthando lwakho ngeminqwazi yamabhakethi, ke oku kuyimfuneko. Uboya obufihlakeleyo buye bathandwa kakhulu, kodwa umbala we-neon wenza ukuba ubenomdla ngakumbi (kwaye ukhululeke!).
Ngokunyuka kwezemidlalo kunye nokuzonwabisa, uNike uye waba yenye yezona mveliso zithandwayo. Hlanganisa i-logo yabo ye-iconic kunye ne-bucket hat trend, ezinye iipinki ze-millennial kunye ne-tie-dye, kwaye kufuneka ube nayo.
Ibhonasi: Inebhendi yokubila epholileyo ngaphakathi, efanelekileyo kakhulu ekuzilolongeni nakwiintsuku ezishushu zasehlotyeni.
Hayi, idenim ayisiyomfuneko nje yeebhulukhwe. Lo mnqwazi wenziwe nge-100% yomqhaphu, ke uphefumla ngokupheleleyo, kwaye uyilo olugugileyo longeza ulonwabo, ukuziva ungaphantsi.
Ukuba sele unayo i-tie-dye sweatshirt, i-leggings kunye ne-bra yezemidlalo, konke oku kufuneka ukugqibezela ukujonga kwakho. Nangona ngamanye amaxesha, iiprintshi kunzima ukuzidibanisa nezambatho, umbala ongathathi hlangothi wale mveliso inye uyenza ukuba ibe bhetyebhetye njengomnqwazi omhlophe omhlophe okanye omnyama webhakethi.
Kulungile, ke ayisiyo ngqo umnqwazi webhakethi, kodwa i-Hairbrella ethengisa kakhulu eAmazon ifanelwe yindawo kulo naluphi na uluhlu lweetayi. Umnqwazi ovalwe ngamanzi awuthwele ngokukodwa uyilelwe ukukhusela iinwele zakho kubumanzi nakwimvula, ngenxa yoko imozulu ayinakuze iphinde iphazamise iinwele zakho.
Isikhumba ukusuka entloko ukuya ezinzwaneni kuhlala kungumbono olungileyo, kwaye ngoku kunokwenzeka. Uyilo oluthambileyo kunye nesiphelo esisezantsi naso senza ukuba uphefumle.
Nokuba ufuna ukubonisa i-hairstyle yakho epheleleyo okanye ujonge owona mnqwazi uphefumlayo, le umnqwazi ungaphaya kakhulu. Le yindlela entle yokongeza (ngokoqobo) isitayile esikhanyayo kwimpahla yakho ngaphandle kokunciphisa umthwalo wakho.
Ewe, iminqwazi yamabhakethi imalunga ne-90s, kodwa ukuba ufuna ukuyibuyisela kwimbonakalo ye-retro, le umnqwazi webhakethi onemibala eqaqambileyo uyimfashini kwaye ngowomlilo wolwandle olandelayo.
Lo mnqwazi webhakethi ukhonkxiwe kwaye uyilo oluthambileyo. Kubonakala ngathi uDaphne Bridgerton wayeza kunxiba ntoni xa ethandana epakini, kodwa ekrazukile ijini, iidges kunye nezikipa. Kulungile nje kwi-brunch enxilileyo.
Le modeli yenzelwe ngemisonto ecekeceke yentsimbi efakwe kwilaphu ukuzisa ukubonakala okuqaqambileyo okuqaqambileyo.
Ewe le ibiza kakhulu. Kodwa ukuba ukhangela imveliso enokwenza ukubukeka okunesitayile ebusuku, iintsuku ezingama-365 ngonyaka, yile nto. Phakathi kweerivets kunye neempahla ezenziwe ngesikhumba, iya kongeza ubumnandi kuyo nayiphi na impahla.
Ukuba uyayithanda iminqwazi yelanga ekwifloppy ekumgangatho ophezulu, kodwa uyithiyile imvakalelo yabo eqinileyo (kwaye kunzima kangakanani ukuba bayipakishe eholideyini!), Le ngxube yeefloppy iminqwazi yelanga kunye neminqwazi yebhakethi yimpendulo kwimithandazo yakho yokuhamba elwandle.
Inemiphetho ebanzi eyongezelelweyo, iyenza njengeambrela yaselwandle yokuhamba. Ukongeza, i-100% yelaphu yomqhaphu yenza ukuba iphefumle ngakumbi.
Ukuba ukhangele umgangatho ophezulu kufuneka ube nento onokuyinxiba ngexesha lokuhamba, ukuzivocavoca, njl., Ke iimpahla zikaSweety Betty ezikumgangatho ophezulu aziyi kukuyekela. Ukuba uyayithanda imibala emnyama kwi-wardrobe, iyafumaneka ngombala we-navy.
Ukuba le ayikhwaza "intle", andazi ukuba yintoni. Lo mnqwazi ngokuqinisekileyo uya kuvusa iimpendulo ezinomdla ezivela kubalandeli bakho be-Insta kunye ne-BFF, kwaye lo mnqwazi uya kongeza ubuntu kuyo nayiphi na impahla. Ukongeza, ine-adjuster size size ukuze wabelane ngayo nabahlobo bakho (isilumkiso esifanelekileyo: baya kukucenga ukuba uboleke le).
Ngaba usafuna ukufumana ujongano lwesinyithi oluhle ngaphakathi kuhlahlo-lwabiwo mali? Lo mnqwazi webhakethi ungaphantsi kwama- $ 20. Ngeli xabiso, ngokuqinisekileyo uya kufuna isilivere kunye negolide. Yisebenzise ukongeza ukukhanya kwijee yakho kunye nokubonakala kweT-shirt, okanye uyidibanise nengubo enomtsalane ebusuku kwaye uphume uphume.
Kuya kufuneka uyazi ukuba umntu uyayidinga le njana yebucket umnqwazi njengesipho. Ewe, loo mntu unokuba nguwe.